Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguNikko Forest House
Xa iyi-440 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Kukho indawo yokuhlala neyokutya kunye netatami mat kumgangatho wokuqala. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze ukwazi ukupheka.
I-2F yindawo yokulala enamagumbi ama-2. U-Nikko udume ngendawo enokubona i-Nikko Toshogu, i-Kegon waterfall kufuphi ne-Nikko. Sizele bububele obufudumeleyo kuni. Ukuba unemibuzo malunga negumbi.
Unokusebenzisa indlu yonke kwaye ukuya kuthi ga kwi-12 abantu banokuhlaliswa. Kukho indawo yokuhlala & yokudlela kunye ne-tatami mat kumgangatho wokuqala, kwaye unokupheka kwimarike enkulu ekhitshini. Umgangatho wesibini yindawo enamagumbi amabini okulala. Igumbi lokulala elineebhedi ezimbini ezine-shingle kunye nebhedi enye eneshengle, igumbi elinye elineebhedi eziphindwe kabini. Iiseti zomgangatho wokuqala we-8 Futon (oomatrasi baseJapan) ziyafumaneka.
I-Niiko iyafikeleleka ukusuka eTokyo; ukusuka kwisikhululo saseTobu Nikko kuyakuthatha imizuzu engama-38 ngemoto.
Iindawo ezinomtsalane zabakhenkethi ezifana ne "Nikko Toshogu" kunye ne "Kegon Falls" nazo zikufuphi.
Nceda uzive ukhululekile ukusibuza malunga nezibonelelo zethu, iindawo zokubukela kunye neendawo zokutyela ezicetyiswayo.
☆ Malunga neziko lethu
・ Sinebhedi ezintathu zeshingle, ibhedi enye ephindwe kabini. Iiseti zomgangatho wokuqala we-8 Futon (oomatrasi baseJapan) ziyafumaneka.
・ Kukho igumbi lokuhlambela eli-1, iishawari ezi-1, izindlu zangasese ezi-2 kunye nesitya sokuhlambela esinye, esiluncedo kakhulu.
・ Kukho ikhitshi kwigumbi, kwaye unokupheka okuthengiweyo kwivenkile enkulu ngexesha lokuhlala kwakho.
・ Silungisa izinto zokomisa iinwele, iitawuli zokuhlambela, iitawuli zobuso, ishampu, isilungisi, isepha yomzimba kunye nebrashi yamazinyo.
Kukho izifudumezi zomoya kunye nezifudumezi zerhasi, izifudumezi ze-oyile, iikhaphethi zombane, iikotatsuon (ukufudumala kweenyawo zaseJapan) umgangatho woku-1 nowesibini.
・ Umatshini wokuhlamba.
・ Nceda usebenzise i-fire tv.
・ Sinikezela nge-wifi yasimahla endlwini yonke.
・ Amagumbi okulala akumgangatho wesibini kunye negumbi loku-1 kwigumbi laseJapan, kwaye kuyafuneka ukuba unyuke izinyuko.
I-wifi ekhawulezayo – i-440 Mbps
Igaraji yendlu yokupaka simahla eseyadini – ineendawo eziyi-3
50" TV ene-I-Fire TV
4.30 ·Izimvo eziyi-10
4.30 · Izimvo eziyi-10
・ Kukho iindawo ezininzi zokujonga onokuthi uzindwendwele ngokuhamba kwindawo yethu. Ungakonwabela ukubona indawo kunye namava afana nokutya isidlo sasemini e "Nikko Toshogu", "Kegon Falls", "Hot spring", njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Nikko Forest House
Inombolo yomthetho: M090030009